Wararka - Waa maxay farqiga u dhexeeya transformers-ka nooca saliidda ah iyo kuwa qallalan?
Waa maxay faraqa u dhexeeya Transformers-ka nooca saliidda ah iyo kuwa qalalan?
1. Dabeecad kala duwan
1. Transformer-ka nooca saliidda: nooc cusub oo ah transformer wax qabad sare leh oo leh qaab-dhismeed macquul ah iyo waxqabad wanaagsan.
2. Transformers-ka qallalan: Transformers-ka birta ah ee ka sameysan birta iyo dabeysha aysan ku dhex milmin saliidda ceymiska.
Marka labaad, sifooyinka waa kala duwan yihiin
1. Astaamaha Transformer-ka nooca saliidda:
(1) Transformers-yada nooca saliidda ah waxay inta badan adeegsadaan saddex hab oo qaboojin: saliid-qaboojin is-qaboojin, qaboojin saliid-qaboojin ah iyo wareegga saliidda ee qasabka ah.
(2) Transformers-ka nooca saliidda ah ayaa kulaylka ka qaada saliidda dabiiciga ah.Nidaamka qaboojinta saliidda ee saliidda leh waxay ku salaysan tahay nidaamka is-qaboojinta saliidda leh, oo ku daraya marawaxad si ay u afuufo hawo taangiga shidaalka iyo tuubada saliidda si kor loogu qaado saamaynta kulaylka.Wareegga saliidda ee qasabka ah waa in lagu shubo saliidda kulul ee ku jirta transformerka bannaanka taransfooriyaha si loo qaboojiyo, ka dibna loo diro transformerka.
2. Astaamaha Transformer-ka nooca engegan:
(1) Waa badbaado, dab-ilaaliye iyo wasakh-la'aan, waxaana si toos ah loogu shaqayn karaa xarunta xamuulka;
(2) Qaado tignoolajiyada horumarsan ee gudaha, xoogga farsamada sare, caabbinta wareegga gaaban ee xoogga leh, dareeraha qayb yar, xasilloonida kulaylka wanaagsan, kalsoonida sare iyo nolosha adeegga dheer.
(3) Khasaare hooseeya, qaylada hoose, saamaynta badbaadinta tamarta cad iyo dayactir la'aanta;
(4) Waxqabadka kulaylka wanaagsan ee daadinta, culeyska culeyska xooggan, iyo kor u kaca hawlgalka inta lagu jiro qaboojinta hawada qasabka ah;
(5) U adkaysiga qoyaanka wanaagsan, oo ku habboon bay'ada adag sida huurka sare.
Macluumad dheeraad ah:
Qalabka ilaalinta kombuyuutarrada ee nooca qallalan wuxuu qaataa DSP-ga horumarsan ee caalamiga ah iyo tignoolajiyada sare ee dusha sare iyo tignoolajiyada bannaan ee baska (CAN), kaas oo buuxiya shuruudaha heerarka kala duwan ee korantada ee substation-ka oo garwaaqsada isuduwidda, digitization iyo sirdoonka saldhigga.
Transformers nooca qalalan waxay dhamaystiri karaan hawlaha ilaalinta substation-ka, cabbiraadda, xakamaynta, xakamaynta, calaamadaynta, duubista qaladka, helitaanka awoodda, xulashada khadka hoose ee hoose, daadinta culeyska wareegga hooseeya, iwm, si shuruudaha farsamada, hawlaha iyo Xadhkaha gudaha ee alaabta ayaa ah kuwo la jaanqaadaya.Transformer-ka nooca qalalan wuxuu qaataa cabbirka ilaalinta iyo kantaroolka la qaybiyey, kaas oo lagu rakibi karo meel dhexe ama la baahin karo, qaabeyntana si aan kala sooc lahayn ayaa loo beddeli karaa iyadoo loo eegayo baahida isticmaale si loo buuxiyo shuruudaha nidaamyada kala duwan.